Matiu 11 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
11 Mgbe Jizọs nyesịrị mmadụ iri na abụọ ahụ na-eso ụzọ ya ntụziaka, o si ebe ahụ gawa izi ihe na ikwusa ozi ọma n’obodo ha dị iche iche.+ 2 Ma mgbe Jọn nọ n’ụlọ mkpọrọ nụ+ banyere ọrụ dị iche iche Kraịst na-arụ, o zipụrụ ndị na-eso ụzọ ya 3 ka ha gaa sị ya: “Ọ̀ bụ gị bụ Onye ahụ nke Na-abịa, ka ànyị ga-atụwa anya onye ọzọ?”+ 4 Jizọs zara ha, sị: “Gaanụ kọọrọ Jọn ihe unu na-anụ na ihe unu na-ahụ: 5 Ndị ìsì na-ahụ ụzọ,+ ndị ngwọrọ+ na-ejekwa ije, a na-eme ka ndị ekpenta+ dị ọcha, ndị ntị chiri+ na-anụkwa ihe, a na-akpọlitekwa ndị nwụrụ anwụ,+ a na-ezikwa ndị ogbenye ozi ọma;+ 6 obi ụtọ na-adịrị onye na-adịghị ahụ ihe ga-eme ka ọ sụọ ngọngọ n’ebe m nọ.”+ 7 Mgbe ha lawara, Jizọs malitere ịgwa ìgwè mmadụ ahụ banyere Jọn, sị: “Gịnị ka unu gara n’ala ịkpa ịhụ?+ Ọ̀ bụ ahịhịa amị nke ifufe na-ebugharị?+ 8 Gịnịzi ka unu gara ịhụ? Ọ̀ bụ onye yi uwe dị yọrịị? N’ezie, ndị yi uwe dị yọrịị nọ n’ụlọ ndị eze.+ 9 Gịnịkwanụ mere unu ji gaa? Ọ̀ bụ ịhụ onye amụma? Ee, ana m asị m unu, ọ bụ onye karịrị nnọọ onye amụma.+ 10 Onye a bụ onye ahụ e dere banyere ya, sị, ‘Lee! Mụ onwe m na-ezipụ onye ozi m n’ihu gị, onye ga-akwadebe ụzọ gị tupu gị abịa!’+ 11 N’ezie, ana m asị unu, N’etiti ndị ụmụ nwaanyị mụrụ,+ ọ dịbeghị onye e mere ka o bilie nke ka Jọn Onye Na-eme Baptizim ukwuu; ma onye ka nta n’alaeze+ eluigwe ka ya ukwuu. 12 Ma malite n’ụbọchị Jọn Onye Na-eme Baptizim ruo ugbu a, alaeze eluigwe bụ ihe mgbaru ọsọ nke ụmụ mmadụ na-achụsosi ike, ndị sikwara ọnwụ na-achọ ya na-enweta ya.+ 13 N’ihi na ndị amụma niile na Iwu ahụ buru amụma ruo n’oge Jọn;+ 14 ọ bụrụkwa na unu chọrọ ịnabata ya, Ya onwe ya bụ ‘Ịlaịja onye a kara aka na ọ ga-abịa.’+ 15 Onye nwere ntị, ya gee ntị.+ 16 “Ole ndị ka m ga-eji ọgbọ a tụnyere?+ Ọ dị ka ụmụntakịrị nọ ọdụ n’ọma ahịa, ndị na-etiku ndị ha na ha na-egwurikọ egwu,+ 17 sị, ‘Anyị gbuuru unu ọjà, ma unu agbaghị egwú; anyị tiri mkpu arịrị, ma unu etighị aka n’obi n’iru uju.’+ 18 N’otu aka ahụ, Jọn bịara, ọ naghị eri ihe, ọ naghịkwa aṅụ ihe ọṅụṅụ,+ ma ndị mmadụ sịrị, ‘O nwere mmụọ ọjọọ’; 19 Nwa nke mmadụ bịara na-eri ihe, na-aṅụkwa ihe ọṅụṅụ,+ ma ndị mmadụ na-asị, ‘Lee! Ọ bụ onye oké nri, nke na-aṅụkwa oké mmanya, enyi ndị ọnaụtụ na ndị mmehie.’+ Ka o sina dị, a na-egosi na amamihe ziri ezi site n’ọrụ ya.”+ 20 Mgbe ahụ, ọ malitere ịkọcha obodo dị iche iche ọ rụrụ ihe ka ọtụtụ n’ime ọrụ ya dị ike, n’ihi na ha echegharịghị:+ 21 “Ahụhụ ga-adịrị gị, Korezin! Ahụhụ ga-adịrị gị, Betseida!+ n’ihi na ọ bụrụ na ọ bụ na Taya na Saịdọn ka a rụrụ ọrụ dị ike ndị a rụrụ n’ime gị, ha gaara echegharị ogologo oge gara aga, yiri ákwà iru uju nọdụ ọdụ ná ntụ.+ 22 N’ihi ya, ana m asị unu, Ọ ga-adịrị Taya na Saịdọn mfe n’Ụbọchị Ikpe+ karịa unu.+ 23 Gị onwe gị kwa, Kapaniọm,+ à ga-ebuli gị elu ruo n’eluigwe? Ị ga-agbadaru+ Hedis;+ n’ihi na ọ bụrụ na ọ bụ na Sọdọm ka a rụrụ ọrụ dị ike ndị a rụrụ n’ime gị, ọ gaara adịgide ruo taa. 24 Ya mere, ana m asị unu, Ọ ga-adịrị ala Sọdọm mfe n’Ụbọchị Ikpe karịa gị.”+ 25 N’oge ahụ, Jizọs kwuru, sị: “Nna, Onyenwe eluigwe na ụwa, ana m enye gị otuto n’ihu ọha n’ihi na i zonahụwo ndị amamihe na ndị nwere ọgụgụ isi ihe ndị a, i kpughewokwara ha ụmụ ọhụrụ.+ 26 Ee, Nna, n’ihi na ime otú ahụ bụ ụzọ ị kwadoro. 27 Nna m enyefewo m ihe niile n’aka,+ ọ dịghịkwa onye maara Ọkpara ahụ n’ụzọ zuru ezu ma e wezụga Nna ya,+ ọ dịghịkwa onye maara Nna m n’ụzọ zuru ezu ma e wezụga Ọkpara ya na onye ọ bụla Ọkpara ya chọrọ ikpughere ya.+ 28 Bịakwutenụ m, unu niile ndị na-adọgbu onwe unu n’ọrụ na ndị e boro ibu dị arọ,+ m ga-emekwa ka unu nweta ume. 29 Nyaranụ yok m,+ mụtakwanụ ihe n’aka m,+ n’ihi na m dị nwayọọ,+ dịkwa umeala n’obi, mkpụrụ obi unu ga-enweta ume.+ 30 N’ihi na yok m adịghị egbu mgbu, ibu m dịkwa mfe.”+